KIIMIKO "BERE BOSK": SHARAXAADDA KALA DUWAN, SAWIR - KU'SAABSAN
Pear Old "Bere Bosk" ma lumisay sumcaddii ay u dhaxaysay bannaanka muddo afar qarni ah. Kala duwan ayaa leh magacyo kala duwan: "Bere Alexander", "Bere Apremon", "Dhalo". Miro badan ayaa dillaacaan xilliga dayrta, laakiin sugitaankooda waa u qalantaa.
Kala duwanaanta Bere Bosk waa asalka Faransiiska: waxaa la siiyay meel u dhaw Apremont (Champagne - Ardena) horaantii qarnigii XYIII. Magaciisa waxaa lagu sharfay aqoonyahanka Pomolog Bosco. Qofka aqoonyahanka ah, oo abuuraya abuur aan la hubin, wuxuu beeray abuurkii kaas oo geedkan koray.
Geedku waa mid dhexdhexaad ah, marar dhif ahna wuxuu gaari karaa cabbir weyn, laakiin si dhakhso ah ayuu u koraa. Krona wuxuu leeyahay iskuduub, astaan, aan lahayn qaro, oo ka kooban laan korodhsan. Da'da, taajku wuxuu noqdaa mid faafin badan. Caleemaha Grayish waa qaro weyn, oo leh burooyinkeeda cadaadiska ah. Ka baxaa ovate, oo leh cirif siman, sida pear ugu badan, laakiin ka weyn.
Wax badan ka baro noocyada kala duwan ee pear-ka: "Thumbelina", "Tenderness", "Rossoshanskaya macmacaanka", "Century", "Pear chinese", "Krasulya", "Bergamot", "Just Maria", "Elena", "Nika", "Xusuusta Yakovlev", "Carruurta", "Avgustovskaya Dew", "Chizhovskaya", "Ussuriyskaya", "Veles", "quruxda Talgarskaya", "Rogneda", "Otradnenskaya" iyo "Marble".
Midhaha huruudka ah ee jilicsan ayaa ku xiran jirida midabka sare leh, waxay leeyihiin dhaadheer, dhalo-qaabeeya. Miisaan weyn: miisaanka hal pear waa qiyaastii 180-200 g. Waxaa habboon in la qiyaaso dusha miraha dushiisa. Maqaarku maaha mid madow, oo leh jajab yar. Jidhku waa caddaan, badiyaa caan ah, aad u macaan, basbaas, oo leh dhadhan lows leh. Waxay leedahay jilicsanaan jilicsan.
Geedku wuxuu leeyahay xayawaan lacag la'aan ah. Si loo hubiyo in ugxansii ugu fiicnayd goobta, waa inaad leedahay pear-pollinator kale.
Waa muhiim! Kiimikada Williams, Bere Napoleon iyo Bon Louise noocyo kala duwan ayaa u ritmi kara.
Geedka wuxuu bilaabmaa inuu midho u dhasho sanadka lixaad ka dib marka la beerto. Midhaha bislaadaan waxay si adag u xiraan cawska waxayna u dhaqmaan si aan loo daadin karin.
Inta lagu jiro xilliga ubax ee guga goor dambe foomka inflorescences badan. Ubax cad waa weyn oo si cadaalad ah u adkaysata dhaxan dambe ee guga.
Xilliga Biyuhu waa Sebtembar. Waxaa xusid mudan in Bisaylkiisa ee isteroberi ah waa mid aan siman lahayn, iyo ma aha oo kaliya size, laakiin sidoo kale qaabka midhaha mid ka mid ah geed ayaa laga yaabaa in ay isu dhexeeya.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay qaybta buugga Guinness ee "Food Big Food", qofka heysta rikoodhka kore wuxuu ka kordhay Koonfurta Wales: sannadkii 1979, miro ayaa lagu diiwaangeliyay miisaankiisu dhan 1405 g.
Kala duwanaanta Bere Bosk waxay leedahay dhalid sare, gaar ahaan ka dib da'da 15 sano. Beeraleydu waxay sharraxaad ka bixiyaan dhalashada isteroberi: xayawaanka beerta hal-hektar ah wuxuu awoodaa inuu soo saaro min 80 illaa 100 sentimitir.
Miraha fasalka "Bere Bosk" waa kuwo si wanaagsan loo qaadi karo. Nolosha shakhsigu waa 30-40 maalmood, taas oo aan aheyn mid aad u badan dhaqankan.
Waa muhiim! Haddii cayayaanka la keydiyo muddo dheer, dabeecadooda dhadhanka ayaa si weyn u yaraada: saxarka dhuxusha Bere Bosc wuxuu noqonayaa mid qalalan oo adag inta lagu jiro kaydinta.
Midhaha xooggan ee afkoda ayaa u oggolaanaya midhaha in aanad ku dhicin xitaa dabayl xoog leh. Sidoo kale, geedka this wax yar u nugul yihiin cudurada fungal, gaar ahaan - qolof.
Geedku waa mid aan qabin carrada, laakiin waliba wuxuu u baahan yahay wax dhexdhexaad ah. Qulqulka xad dhaafka ah ee ciidda, iyo sidoo kale hawada, si fiican u dulqaadan.
"Bere Bosk" waxaa laga yaabaa in uu yahay midka ugu yar u adkaysta dhammaan noocyada kala duwan ee dhaqanka. Sidaa darteed, gobollada ugu haboon ee beerashadooda waa gobolka xeebta.
Waxaan kugula talineynaa inaad iskaa wax u qabatid dhammaan waxyaalahaa: beerashada (dayrta ama gu'ga), gooyo iyo jarjar geedeedka pear.
Midhaha malabka Bere Bosc ayaa si fiican loo isticmaalaa. Cunto gebi ahaan, maaha mid ku haboon sababtoo ah xajmiga, laakiin saxmadda iyo waxtarka ayaa fiican.
Haddii aad go'aansato inaad geedkaa geedkan ku beertid, waa in aad tixgelisaa waxoogaa murugo leh.
Ma taqaanaa? Miro khudradu waxay ka caawisaa in ay kor u qaado kulaylka dadka.
Si dhakhso ah u kora;
wuxuu leeyahay ballaaran, adkaysi u cayayaanka iyo cudurrada midhaha;
oo aan si siman u dhicin, kaas oo sii dheeraynaya muddada cuntada;
adkaysi u ah gustska dabaysha.
Wuxuu u baahan yahay manjooyin joogto ah;
si khaas ah miraha kaliya ee gobollada diiran;
ma aha baraf u adkaysta mana jecla abaaraha;
degaan badan oo la adeegsan karo.
Kala duwanaantu waxay u qalantaa dareenka haddii keliya, sababtoo ah, inkastoo cilladaha jira, waxaa loo doortay beeralayda in ka badan hal qarni, taas oo macnaheedu yahay in ay jiraan daqiiqado badan oo wanaagsan oo lagu kordhinayo pear Bere Bos inta ay u muuqato in jaleecada hore.